Baarlamaanka oo kordhiyay muddo xileedka Madaxweynaha Hir-Shabeelle - Awdinle Online
Baarlamaanka oo kordhiyay muddo xileedka Madaxweynaha Hir-Shabeelle
Magaalada Jowhar ee Gobolka Shabeellaha dhexe waxaa Maanta kulan ku yeeshay Xildhibaannada Baarlamaanka dowlad goboleedka Hir-Shabeelle, iyaga oo muddo xileedka Madaxweynaha Hir-Shabeelle ka dhigay muddo Shan sano ah.
Kulanka Baarlamaanka Hir-Shabeelle oo ay goobjoog ka ahaayeen 56 Mudane ayaa waxaa ay dhamaantood cod gacan tag ah ku ansixiyeen in Madaxweynaha Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe Xusseen uu Hir-Shabeelle hoggaamiyo Shanta sano ee soo socota majirin wax diiday ama ka aamusay.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hir-Shabeelle oo kulanka shir guddoominayay ayaa sheegay in uu ansax yahay in muddo xileedka Madaxweynaha Hir-Shabeelle uu noqdo Shan Sano.
Tallaabadaan ay Baarlamaanka Hir-Shabeelle ku kordhiyeen muddo xileedka Madaxweynaha Hir-Shabeelle oo markii hore ahaa Afar sano ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli muran uu kajiro dhismaha Hir-Shabeelle, isla markaana dadka degan gobolka Hiiraan ay kasoo horjeedaan.
Magaalada Beledweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan waxaa fariisin ka sameystay maleeshiyaad hubeysan oo la Magac baxay jabhadda xaq u dirirka Hiiraan, kuwaas oo dhowr jeer u diiday in Madaxweynaha Hir-Shabeelle uu tago Beledweyne.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo sheegtay in Kenya hubeysay jabhad digniina u dirtay
Next articleCiidamo ka wada tirsan dowladda oo Muqdisho ku dagaalamay